2008 မှာဘာတွေထူးခြားခဲ့သလည်း ????? — MYSTERY ZILLION
2008 မှာဘာတွေထူးခြားခဲ့သလည်း ?????
December 2008 edited January 2009 in Tech News
Mz မှ မင်ဘာများအပေါင်းတို့ကိုပြောချင်တာက
2008 မှာဘာတွေ ထူးခြားခဲ့သလည်း...။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေ... ဆွေးနွေးပေးကြပါခင်ဗျာ...
ငါတော့ ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ် .. ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရခဲ့သလဲဆိုတာလေးတွေပေ့ါဗျာ......
အင်းထူးခြားတာကတော့အမှန်ပဲဗျ ထူးတော့ကျွန်တော့်အတွက်ထူးသွားတယ် အသေးစိတ်ဖတ်ချင်ရင်တော့ ခြောက်လစာရေးထားတာတော့ရှိတယ် လာဖတ်ကြည့်ပါ နောက်ခြောက်လကတော့ စာမူစီနေတုန်းပါ နောက်တော့တင်ပါ့မယ်
အဲတစ်ခုပြောလိုတာကတော့ မှတ်ညဏ်မကောင်းသူများကတော့ သူတို့ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ မမှတ်မိတော့ဘူးတဲ့ အဲ ဘယ်သူတွေလဲမသိဘူး နော်..................
10 တန်းအောင်တယ် သိတော့ဘူး ထပ်ပြောမယ်ဗျာ.....ကျန်တဲ့လူတွေလည်းပြောကြပါဦး
Dec GSM Prepaid Card များ
Nov Wi-Max ပေါ်လာသည်
Sep internet အသုံးများလာသောကြောင့် နည်းပညာလုံခြုံရေးကိုပါ သတိပြုမိလာသည်
Aug ဘန်းကျော်မှာinternet အသုံးများလာကြောင်းသတိပြုလာကြသည်
May Nargis တိုက်သွားသည် လူတွေအားလုံးနိူင်ငံခြားသတင်းတွေအပေါ်ဂရုစိုက်လာကြသည်
2008 မှာ ထူးခြားတာကတော့ MZ ရဲ့ မန်ဘာ ဖြစ်လာတာပါဘဲ ... ကျန်တာကတော့ သိ်ပ်ထူးထူးခြားခြားရယ် မရှိပါဘူး ...(မနှစ်က အတိုင်းပါဘဲ :D:D) .. MZ မန်ဘာ ဖြစ်လာရတဲ့ အတွက် အသိပညာ တိုးလာသလို သူငယ်ချင်းတွေလဲ တိုးလာပါတယ် ...
ကျန်တာတွေတော့ သိပ်မမှတ်မိတော့ဘူး .. ကို gipsy ပြောသလို မှတ်ညဏ်မကောင်းတဲ့သူ ဖြစ်တော့မှာဘဲ နော် ... :P:P:P
ကို အိုင်းစတိုင်းကို တော့ ဒီနှစ်ရဲ့ ကျေးဇူးတင်မဲ့သူ စာရင်းထဲ ထည့်ထားပါတယ် ... အကူအညီတောင်းတော့ PM လေးနဲ့ ချက်ချင်း ပြန်ကူညီခဲ့လို့ပါဘဲ .....:):):) (ကျေးဇူးနော်)
MZ ရဲ့ မန်ဘာ၀င် အားလုံး နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ ... Happy New Year ပါ ....
ကဲကျွန်တော်လဲပြောပြီ ဒီနှစ်မှာဘာတွေထူးခြားလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ဘဝမှာအထူးခြားဆုံးနှစ်လို့ပြောရမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီနှစ်ထဲမှာ ကျွန်တော် ဘလောဂ်လုပ်ဖြစ်ပြီးဘလောဂ်လုပ်တတ်သွားတယ် MZ မော်မော်ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ program သင်တန်းတတ်ဖူးတယ်(သင်တန်းဆိုလို့အခုမှတတ်ဖူးတာ)။ ပြီးတော့ အင်တာနက်ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်ပြီး ပညာတော်တော်တိုးခဲ့တယ်။ ကိုပီဇီပြောသလို self-study ရော ဆိုင်ကအစ်ကိုအကူအညီရော MZ အကူအညီရောပေါ့။
အားလုံးတိုးတက်လာကြပါတယ်ဗျာ....ကျတော်တို့အားလုံး တိုးတက်တာပါ (ဘတ်စ်ကား)ဟီး နောက်တာ:D တို့ပြညိကြီးကတော့မီးစက်သံတွေတညီးညီးနဲ့ မြည်ဟီးလို့ စီးချက်ညီညီနဲ့ ဆက်လက်ချီတက်ဦးမှာပါ ) Happy 2009 ) အတွက်ဆုမွန်ကောင်းကတော့ 2009 မှာဆီစျေးမတက်ပါစေနဲ့ Note book များစျေး ဇောက်ထိုးကျပါစေ MZ မှာ မန်ဘာတွေကို Note Book တွေ ကံစမ်းမဲ ပေးနိုင်ပါစေ.... Wii Max တွေ ဘယ်နေရာသုံးသုံး ကွန်နက်ရှင်ကောင်းကောင်းမိပါစေ...အင်း ... နောက်ဘာကျန်သေးလဲ... သိတော့ဘူးဒီလောက်ဆို ကျေနပ်ပြီ....ဟီး ... ကျန်သောနောင်တော်များဆက်လက် ဆုတောင်းပေးကြပါကုန်....:D
aroZif ကတော့ MZ member ဖြစ်တယ်။2008 မှာ။ အဲတာကြောင့်IT နှင့်ပက်သက်ပြီး အသိပညာတွေ တိုးလာတယ်။ရည်မှန်းချက်တွေ ခိုင်မာလာတယ်(ပိုခေါင်းမာလာတယ်:D)။MZ ကိုညွန်းတဲ့ Tweety Coaster :77::77::77: aroZif မေးတာကိုဖြေပေး ကြတဲ့ MZ က ဘော်ဘော်တွေ:77::77::77: သင်ဆရာ၊မြင်ဆရာကြားဆရာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်:77::77::77:
အထူးတလည်ကျေးဇူးတင်ရမှာကတော့ GwiGwi :D:D
(ပြောရင်းပြောရင်းနဲ့ အကယ်ဒမီရတဲ့ မင်းသမီး လေသံပေါက် သွားပြီ:D:D:D)
2009 ကတော့ ဒီထက်ပိုကြိုးစားမယ်(ထင်ရတာပဲ:D)Web application ပိုင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီးပိုလေ့လာဖြစ်မယ်ထင်တယ်။(ထင်ရတာပဲ:D)
၂၀၀၈ ဟာ ကျနော့်အတွက် အထင်နဲ့ အမြင် တခြားဆီဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲပေးတဲ့နှစ်လို့ ဆိုရမယ်။ စိတ်ကူးယဉ်လွန်းတဲ့ဟာနဲ့ တကယ့်လက်တွေ့ ဘာမှမဆိုင်ပါလား ဆိုတာ ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် သိလိုက်ရတဲ့နှစ်ပါပဲ။ သွားချင်ရောက်ချင်လွန်းလှချီရဲ့ ဆိုတဲ့နေရာ ကိုရောက်လာတော့လဲ ကိုယ့်အတွက် ဘာမှအကျိုးရှိအောင် မလုပ်နိုင်သေးတဲ့ အခြေအနေ။ ဘာတွေတိုးတက်လာခဲ့လဲဆိုတော့ အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာ ဘာမှထူးခြား တတ်လာတယ်မရှိပေမယ့် အွန်လိုင်းမှာ အချိန်ကြာကြာဝင်ဖြစ်ပြီး မိတ်ဆွေသစ်တွေရလာတာ၊ MZ member ဖြစ်လာတာ၊ ဒါလောက်ပဲရှိပါတယ်။ တခါတလေ ငါ IT ကိုရော တကယ်မှစိတ်ဝင်စားရဲ့လားလို့ ပြန်မေးရလောက်အောင် ကိုယ့်ရဲ့ ညံ့ဖျင်းမှုတွေကို နှိုင်းယှဉ်သိလာတဲ့ ၂၀၀၈ ကို နှုတ်ဆက်ရင်း။
အားလုံးပဲ နှစ်ကူးမှာ အပြစ်မကျူးပဲ IT ပညာတွေကို အမြစ်ပါတူး ) နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်တယ်။
ကျွန်တော် ကတော့ ထူးထူးရှားရှားဗျာ 2008 ခုနှစ်ကို ပြန်ကြည့်ဖြစ်လိုက်ရင် MZ အတွက် ကျွန်တော် တော်တော် ကြိုးစားနိုင်ခဲ့ လို့ အတော့ ကို ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ နှစ်ပတ်လည်ပွဲတစ်ပွဲကနေစလို့ Offline Marketing တော်တော် လေး လုပ်ဖြစ်ခဲ့ သလို အွန်လိုင်း စွယ်စုံကျမ်းတစ်ခုကို အခုလောက်ထိ ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ စကားတွေ ကြားကနေ ဖြစ်လာအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ကုန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ဟောင်းမှာ ချစ်သူအသစ်ပါရခဲ့တယ်။
2009 ခုနှစ်မှာတော့ ကျွန်တော် ကိစ္စတော်တော်များများ ကို ရပ်တန့် ပြီး မလုပ်တော့ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။
လွမ်းနေမယ် 2008 ရယ်
firefox3က ို install ဖြစ်တယ်။ Vista Ultimate ကို install လုပ်ဖြစ်တယ်။ အော်မုန်တိုင်းဆိုတာဒါမျိုးကိုးလို့ရောပေါ့(Nargis)
ဇူလိုင်လကုန်လောက်မှာ ဘန်းဝိုင်း (s'pore ရေပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့နေရာ)ရောက်ဖြစ်တယ် $ နောက်လိုက်ဖို့ပေါ့ ....
အော်ဝင်းဒိုး7တဲ့ နောက်ပီးရင်ကော ဝင်း8လား
Thanksalots to MZ and all.......,burglish,........................................&
မုန်တိုင်းသင့်ဒေသတွေထဲကို ရောက်ခဲ့ပြီး လူသားတွေနဲ့အတူ ငိုကြွေးခဲ့တယ်.. လုပ်နိုင်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်..
ကွန်ပျူတာ အသစ်တစ်လုံးထပ်ဝယ်နိုင်ခဲ့တယ်.. ကင်မရာအသစ်တစ်လုံး ထပ်ဝယ်နိုင်ခဲ့တယ်.. (လူကတော့ ငတ်ပြီးသေမလိုဖြစ်သွားတယ်.. )
MZ EDU မှာ ဆရာဖြစ်တယ်.. (စေတန်က အရူးကိုဘုံမြှောက်လို့လေ.. )
IT လောကထဲမှာ အရင်ကမသိသေးတာတချို့ကို ထပ်သိခဲ့တယ်..
2008 ဟာ ကိုယ့်တစ်ဦးထဲအတွက်ပဲသုံးသပ်ရရင် ကောင်းသောနှစ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..
2009 ခုနှစ်ကို မကောင်းတာလေးတွေဖယ်ပြီး ကောင်းတာလေးတွေကိုသက်သက် Control + Click နဲ့ ရွေးလိုက်မယ်.. Copy ပွားပြီး 2009 မှာ Paste လုပ်လိုက်မယ်.. လာလေရော့ လဟယ်.. :65: :65:
ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်း၀င်ပြောလိုက်ပါဦးမယ်ခင်ဗျာ.. 2008 ဟာ ကျွန်တော့်အတွက်လည်း ထူးခြားတဲ့ နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၁၀ တန်းကို__ ဘာသာနဲ့အောင်ခဲ့တယ်...
PR Approved ဖြစ်လာတယ်....
laptop ipod phone ရတယ်....
သူငယ်ချင်းတွေအများကြီးထပ်ရတယ် (at online and offline)
နှစ်ဟောင်း(၂၀၀၈)ရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့မှာ TweetLax-1.0-beta3 ဆိုတဲ့ linux distro တစ်ခုကို Slax Linux ကနေအခြေခံပြီးလုပ်ခဲ့တယ်။ Pentesting Distro တစ်ခုဖြစ်လာဖို့ ရည်ရွယ်တယ်။
ဒါကြောင့် BackTrack အခြေခံတဲ့ Slax ပေါ်မှာပဲ အခြေခံပြီးလုပ်ခဲ့တာပါပဲ။
ကျွန်တော်ကတော့ 2008 မှာ wi-fi .......<wireless internet connection technology> တိုးလာတယ်လို့ထင်ပါတယ် :6:
ကိုယ့်အသုံးမကျမှုကြောင့်မဟုတ်ပဲ တစ်ခြားသူတွေ ကြောင့် အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ ရှုတ်ချမှုကိုခံရတဲ့ နှစ်:14:
လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်လောက်ကအရမ်းဖြစ်ချင်လုပ်ချင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတစ်ခု (ရူးသွပ်လွန်းလို့အသေအလဲကြိုးစာဘူးခဲ့တုန်းကလုံးဝကိုဖြစ်မလာခဲ့ပဲ) ဘာမှမကြိုးစားရပဲကိုယ့်ရှေကိုအလိုအလျောက်ရောက်လာတဲ့နှစ်:106:
ဘဝမှာ လူဖြစ်ရတာကို စိတ်အနာဆုံးနှစ်:2:
2008 မှာ အင်တာနက်ဆိုင်တစ်ဆိုင် ကို အခြေခံအားဖြင့် ဘယ်လို ထိန်သိမ်းရမယ်ဆိုတာသိလာတယ်..
တရုတ်ဒီဇယ်မီးစက်အကြောင်း တော်တော်လေးသိသွားတယ်.. (မီးပျက်လိုက်လို့)
အမ်ပီတီ ဆိုတာ ဒါပါလားလို့ ကောင်းကောင်းသိသွားတယ်..:((
Networking အကြောင်း တော်တော်လေးသိလာတယ်(Thanks.. MZ & MF):67:
ယောက္ခမ ကို သောက်ညင်ကတ်တတ်လာတယ်:14:(အရင်က မကတ်ဘူး)
စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တွေ ဝင်လာတယ်.. (ဒါတွေ ၂၀၀၈ မှာ ချန်ခဲ့မှဖြစ်မယ်)
မေမေကို ပိုချစ်လာတယ်.. :77:
အရင်တုန်းက ချမှတ်ခဲ့တဲ့ ပေါ်လစီတွေ အကုန်မှားနေတာ သိလိုက်ရတယ်၊
လက်အောက်ငယ်သားတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပေါ်လစီအမှားတွေ၊ ငွေရေးကြေးရေး ပေါ်လစီအမှားတွေ၊ အမှားတွေ မှားမှန်းသိတဲ့ နှစ်တစ်နှစ်ပါပဲ။
MMEnglish ကို လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။
သမီးလေးက ပိုချစ်ဖို့ကောင်းလာတယ်။ မိသားစု ပိုဆန်လာတယ်။
MZ ကို ပိုချစ်လာတယ်။
mz member ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပို သိလာတယ် ။ ပိုရှုပ်လာတယ်။
ဒီနှစ်က ပထမဆုံးနိုင်ငံခြား ထွက်လာတဲ့ နှစ်ဆိုတော့ တိုင်လဲပတ်တယ်၊ ပျော်လဲပျော်တယ်။ တစ်နှစ် နဲ့ ညီမျှတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေလဲ တွေ ရလာတယ်။ ဘဝ ဆိုတာဘာလဲ သိလာတယ်။
အင်း အင်တာနက်ကို ပိုသုံးတတ်လာတယ်။ နောက် အူဘွန်တူ ဆိုတဲ့ OS ကြီးပါသုံးတတ်လာတယ်။
wordpress သုံးပြီး ဘလော့လုပ်တတ်လာတယ်။
MMENGLISH မှာ ပိုစ့်တွေ တော်တော်ရေးမိတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်နှစ်တာ ကုန်သွားတယ် မပြောင်းလဲ တာတစ်ခုတော့ ရှိသေးတယ်။ ရည်းစား မရသေးဘူးဗျ။ (
အားလုံး ၂၀၀၉ မှာ ကျနော်တို့ တစ်တွေ မလိုချင်တာကြီးတွေ အမြန်ပြောင်းလဲ ပါစေ လို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
၂၀၀၇ တုန်းက ရုန်းကန်ခဲ့ရတာတွေ ၂၀၀၈ မှာ တည်ငြိမ်လာတယ်။ ကိုယ်လုပ်ကိုင်စားနေတဲ့ နည်းပညာမှာ အရင်ကထက်ပိုသိလာခဲ့တယ်။ မသိသေးတာတွေလဲ ပိုများလာတယ်၊ မသိသေးပါလားလို့ သိလာတာကိုဘဲ ကျေးဇူးတင်ရမယ်။
၂၀၀၈ မှာ ဘလော့သေချာစရေးဖြစ်တယ်။ အရင်က စာမရေးဘဲ (လူလဲပေးမသိဘဲ) ဟိုလုပ်ဒီလုပ် လုပ်နေတယ်။ စာရေးဖို့အားပေးတဲ့ ကိုပီဇီကို ကျေးဇူးတင်တယ်။ လူလဲပေးသိလိုက်တယ်။ လာလဲအားပေးကြပါတယ်။ ဒါထက်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ မိန်းမကို အချိန်ပေးတာနဲသွားတယ်။ သူ့ခမျာ တီဗွီတောင် တစ်ယောက်ထဲကြည့်ကြည့်နေရတယ်။ ၂၀၀၉ မှာတော့ မိသားစုကို အချိန်ပိုပေးရမယ်။ ပြေးကြည့်မှ ဒီနှစ်ယောက်ရှိတာ
၂၀၀၇ မှာ ml လုပ်ရင်း ဒီရောက်တယ်။ တော်တော် ဆွေးနွေးဖြစ်တယ်၊ နေ့မနား ညမအိပ် အချိန်ပြည့်ဒီပေါ်ရောက်နေတယ်၊ ဘယ်သူမေးမလဲ၊ တောင်းမလဲ ကိုယ်အရင်ဖြေတာဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်။ (အမှန်မှာ ကိုယ်ဟာ အက်ဒမင်မဖြစ်ချင်ခဲ့ဘူး၊ သို့ပေတဲ့ သူတို့က အဆင့်တိုးခဲ့တယ်။ တချို့ဟာတွေက အက်ဒမင်မှလုပ်ပေးနိုင်တာဆိုတော့ လက်ခံလိုက်တယ်။ ကိုယ်က သာမန်မင်ဘာအဖြစ်ဘဲနေခဲ့ချင်တာ။) နောက်တော့ အလုပ်များလာပြီး ဒီမှာ ဆွေးနွေးမှုအရှိန်လျော့လာတယ်။ ဘဝဆိုတာ အနိမ့်အမြင့်ရှိသလို mz ကလေးဟာလဲ ဘဝရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလိုဘဲ၊ သူလဲ အနိမ့်အမြင့်ကြုံခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ကောင်းသော ပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်။ ကိုယ်ဟာ အပြောင်းအလဲမှာ ဆိုးတဲ့နေရာက ပါခဲ့ရင်တောင် ပြောင်းလဲသွားတာလေးအတွက် ကြည်နူးနေခဲ့တယ်။ ကိုယ်ဟာ ဘယ်ရေစက်လဲမသိ mz ကိုချစ်လို့နေတယ်။ mz ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်နေတာကို အမြဲကြည်နူးတယ်။
သူများနိုင်ငံမှာ အလုပ်လာလုပ်တာဆိုတော့ အလုပ်တွေသုံးခုလောက်ပြောင်းခဲ့တယ်။ (သုံးနှစ်အတွင်း) နားလည်လိုက်တာတော့ ခဏခဏ မပြောင်းတာကောင်းတယ်ဆိုတာဘဲ၊ ခုတော့ ကြာကြာလုပ်မယ်လို့ တွေးထားတယ်၊ (စိတ်ကြိုက်လဲ ရပြီကိုး )။
ငယ်ငယ်ကထဲက လူနဲ့ ရန်မဖြစ်ဘူးတဲ့ ကိုယ်ဟာ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ နှစ်ခါတိတိ အခြေအတင်ဖြစ်ဖူးတယ်။ ။ နှစ်ခါစလုံး စေတနာရှေ့ထားလို့ ဖြစ်ခဲ့တာမို့ ကိုယ့်ဘာသာတော့ လူဆိုးကြီးလို့တော့ မထင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အခြေခံ မကောင်းတဲ့ အတွက် အထိနာခဲ့တယ်။ စိတ်ထိခိုက်တယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ သေချာသွားတာတော့ နောက်ဘယ်တော့မှ အခြေအတင် မဖြစ်အောင်နေတော့မယ်လို့၊ (ပညာရည်မပြည့်သေးဘူး အဲဒီဘက်မှာ :d)
၂၀၀၉ မှာတော့ အင်္ဂလိပ်စာကို ပိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလားလို့။ ကိုပီဇီတို့ တူးတူးတို့ အဖွဲ့တွေဆီမှာ တပည့်သွားခံရမယ်။ ကလေးတစ်ယောက်တော့လိုချင်တယ်ဗျာ ၂၀၀၉ မှာ ရအောင် ကြိုးစားရမယ်။ (အဟိ)
2008 ခုနှစ်မှာ ဘယ်တုန်းကမှ မလုပ်ဖူးတဲ့ web development ကို စပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်။ PHP ကို အတော့်ကိုလေ့လာဖြစ်တယ်။ မလေ့လာလို့လည်း မဖြစ်ဘူးလေ ကျွန်တော့် website က PHP နဲ့ ရေးထားတာကိုး။ ASP.NET ကိုလေ့လာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် သေချာတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူး။ စလုံးသွားမယ်ဆိုပြီး MCPD ဖြစ်အောင် ဖြေလိုက်သေးတယ်။ လက်မှတ်ပဲရလိုက်တယ်။ စလုံးကို မသွားဖြစ်လိုက်ဘူး။
မုန်တိုင်းဆိုတာ ဒါပါလားလို့ သေချာသိသွားတယ်။
ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုမှာ ၀င်လုပ်ဖြစ်တယ်။ အဲ့မှာ နေရာလုတာတို့၊ ဖားတာတို့ဆိုတဲ့ အတွေ့အကြုံအသစ်တွေ ရလာတယ်။
ကြုံတုန်းလေး ကြွားလိုက်အုံးမယ် ကျွန်တော့်ကို ချစ်သူတစ်ယောက် ၂၀၀၈ ခုနှစ်က လက်ဆောင်ပေးတယ်ဗျ။
၂၀၀၉ အတွက်တော့ အတော့်ကိုပြင်ဆင်ရအုံးမယ်။ ASP.NET ကို ပြန်ပြီးတော့ရေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။
အရေးကြီးတာ ကျန်သွားတယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ကျွန်တော် MZ Member စဖြစ်တယ်ဗျ။ ကို tweety နဲ့ MZ ကျေးဇူးကြောင့် online security ကို တော်တော်လေး သိလားတယ်။
တော်တယ်တီလေးရာ.. တီလေးဆီမှာ တပည့်လာခံရဦးမယ်...
အင်း 2008 ခုနှစ်အစမှာ ကျွန်တော်တော်တော် အထီကျန်စံခဲ့ပါတယ်။ အဲလိုဖြစ်အောင်လည်းကိုယ်ပဲလုပ်ခဲတာလို့ခံစားခဲ့ရတယ်။
mysteryzillion မှာ plublic relation moderator ဖြစ်ခဲ့တယ်။ နောက် နှစ်ကုန်ခါ နီးမှာ Post Control Admin တစ်ယောက်ပါဖြစ်ခဲ့တယ် ။ MZ က ဘော်ဘော်တွေနဲ့ တော်တော်ရင်းနှီးခဲ့တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ တော်တော်များများရတဲ့ နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဘလော့ စလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ နေရတဲ့ အချိန်တွေ တော်တော်များခဲ့တယ်။ ပျော်စရာကောင်းတဲ့နှစ်ဖြစ်သလို စိတ်ညစ်စရာလေးတွေလည်း ခံစားခဲ့ရတယ်။ 2009 မှာတော့ စိတ်သစ်လူသစ်ဖြစ်အောင် နေမယ်လို့တော့ စဉ်းစားထားတယ်။
မန်းတလေး ကနေရန်ကုန် ရောက်လာတယ်။ မကြာပါဘူး နာဂစ်နဲ့တွေ့တော့ တာပဲ
IT Field ထဲကို ခြေစုံပစ်၀င်ခဲ့ တယ်။ အိုင်တီနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ သင်တန်းတွေတက်ဖြစ်တယ်။
Mz member ဖြစ်လာတယ်။ ပညာတွေ သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီးရခဲ့တယ်။
ဘ၀ တဆစ်ချိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့နှစ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပျော်လည်းပျော်တယ် စိတ်ညစ်တဲ့ အခါတွေလည်းရှိခဲ့တယ်။ အခုတော့ အိုင်တီ လောကထဲမှာ တ၀ဲလည်လည်နဲ့ပေါ့ :O:)
အားလုံး Happy New Year ပါနော်
နှစ်သစ်မှာ ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန်န နဲ့ လက်တွေ့ တထပ်ထဲကြကြပါစေ။
nargis ပေါ့.....ဟိုင်းကြီးကိုရောက်ခဲ့တယ်....သူငယ်ချင်းတွေနဲ ့ကူညီရင်း
MZ member ဖြစ်လာတယ်......Internet shop မှာလုပ်ခဲ့တယ်............
အလုပ်စလုပ်တဲ့နှစ်ပေါ့...................အခုတော့ မူဆယ်မှာ လာ ယောင်နေတယ်..:)
ကျနော့အတွက် 2008 ခုနှစ်ကတော့ ဂန်ဘာရီဖုံးတဲ့နှစ်ပါပဲ။ ဘန်းကျော်က မီးကတောင် ပျက်ပြီး ပြန်လာသေးတယ်။ Istein ရဲ့ backbone ကို ရေငုပ်သင်းဘောဝင်တိုက်သွားပုံရပါတယ်။ တခါတည်းကို ကျသွားလိုက်တာ။ ကံကောင်းချင်တော့ ကြိုးတချောင်းကြလာတယ် ကံဆိုးချင်တော့ အဲဒီကြိုးက လည်ပင်းလာရစ်နေတယ်။ သေချာကြည့်လိုက်မှ ဘင်လာဒင် မုတ်ဆိတ်ဖြစ်နေတယ်။
2008 ဟာ အိပ်မက်တွေ တကယ်ဖြစ်လာတဲ့နှစ်ပါပဲ။ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် local forum လေးတစ်ခုလုပ်ဖို့အိပ်မက်ခဲ့တာကြာပါပြီ။
ကိုယ်တိုင်က IT field ကမဟုတ်တော့ လမ်းစကလုံးဝကို ရှာမရခဲ့ပါ။ စမ်းတစ်ဝါးဝါးနဲ့ပါ။ 2008ဆန်းမှာ MZ ကိုစရောက်တယ်။
ဒီမှာ တကယ့် Pro တွေပဲဆိုပြီး လာဖတ်နေခဲ့ပါတယ်။
Gtalk chat လောက်သာတတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကို Joomla! နဲ့ forum လေးတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်အောင် MZ ကျေးဇူးတွေများလှပါတယ်။ နောက်ပိုင်း အလုပ်တွေဘာညာ ကျကျနနရပြီးမှ အိမ်မှာ ကြိုက်သလို internet သုံးနိုင်ရင် MZ ကြီးအတွက် တတ်နိုင်သလောက် ကျေးဇူးဆပ်ချင်ပါသေးတယ်။ MZ နဲ့ Joomla! ကိုသဲသဲမဲမဲ လိုက်နေလို့ စာမေးပွဲကြီးကျမလိုဖြစ်ပြီးမှ ကံကောင်းပြီးအောင်သွားတာကလည်း တစ်ခါမှမကြုံဖူးသလို တကယ်ထူးထူးခြားခြားကံကောင်းတဲ့ နှစ်တစ်နှစ်ပါ။ IT လောကထဲကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဝင်ခဲ့လို့လည်း လုပ်နေကျအလုပ်နဲ့ Computer ကို အချိန်အချိုးကျကျ ခွဲဝေပေးနိုင်တဲ့ ပညာပါတိုးတက်လာလို့ 2008 ဟာ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး အတိုးတက်ဆုံး နဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အကျေနပ်မိဆုံး နှစ်တစ်နှစ်ပါ။
သာမန်ပါပဲ ... ဘာမှထွေထွေထူးထူးရယ်တော့မရှိပါဘူး။ ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေ အကြီးအကျယ်ကျဆင်းပြီး ရွာပတ်နေတယ် motivation ပျောက်နေတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ နှစ်ကုန်သွားတာပါပဲ။ အလုပ်လုပ်လိုက်၊ Learning လုပ်လိုက်နဲ့။ ၂၀၀၈ မှာ ထူးခြားတာဆိုရင် Blog ကိုသေချာလုပ်ဖြစ်တယ်။ အရင်နှစ်တွေက လုပ်မယ်လုပ်မယ်နဲ့ မလုပ်ဖြစ်ဘူး။ ကိုပီဇီနဲ့တွေ့မှ Blog ဖြစ်လာတာ ။ နောက်နှစ်မှာတော့ ရေးစရာတွေ အများကြီးဖြစ်မှာသေချာပါတယ်
2008 မှာအရင်လုပ်နေတဲ ့အလုပ်ထက်ပိုပြီးတော ့အဆင်ပြေပြီး..အကျိုးခံစားခွင် ့ပိုတဲ ့အလုပ်သစ်ရခဲ ့တယ်:)..ဒါပေမဲ ့ကံဆိုးချင်တော ့ကမ္ဘာစီးပွါးပျက်ကပ်နှင် ့ကြုံပြီးတော ့...မှန်းချက်နှင် ့နှမ်းထွက်မကိုက်ခဲ ့ပြန်ဘူး:2:
ကျနော်အနေနှင် ့ကတော ့2008 ကိုဆိုးချက်ကကမ်းကုန်တဲ ့နှစ်လိုဆိုချင်တယ်...ပေါင်းလိုက်ရင်၁၀....ဘူကြတဲ ့နှစ်:14:ဘေးထိုင်ဘူကြအလုပ်သမားတွေပေါများတဲ ့နှစ်:14:ဒါပဲလားဆိုတော ့မဟုတ်သေးဘူး...အိမ်ဝယ်လိုက်တဲ ့လူတွေ...မိအေး၂ခါနှာတဲ ့နှစ်...:2:ဝယ်တဲ ့အချိန်တုန်းကယူရို၂သိန်းခွဲ၃သိန်း...ခုတော ့၆သောင်း၇သောင်းလောက်ပြ ုတ်ကြသွားတယ်...ဒါကပထမတစ်ချက်...ဒုတိယကတော ့အလုပ်ချိန်ထက်ဝက်လောက်ပဲရတော ့တယ်...အဲဒီတော ့အိမ်ဝယ်ထားတဲ ့လူတွေကငိုရမလို..ရီရမလိုနှင် ့...သေပြီဆရာ:O
အလုပ်တွေပြ ုတ်ကုန်တဲ ့လူတွေအများကြီးပဲ:65:ဖုန်းဆက်ရင်....မင်းဘယ်နေ ့နားလဲ...မနက်ဖြန်...သြော်...မနက်ဖြန်ကစပြီးတော ့နားပြီလားလို ့..မပြောရဲလောက်အောင်ဖြစ်ခဲ ့ရတဲ ့နှစ်...:Dဘယ်နေ ့များကိုလည်းအလုပ်ပြ ုတ်မလဲဆိုပြီးတော ့ကျီးလန် ့စာစားဖြစ်ခဲ ့ရတဲ ့နှစ်:D:D...ခုချိန်2009 စတဲ ့အထိစီးပွါးပျက်ကပ််ဆိုးကြီးရဲ ့အရိပ်ကမလွတ်သေးပါဘူး...
ရင်မောစွာနှင် ့၂၀၀၉ ကိုလှမ်းမျှော်ကြည် ့ရင်း...သြော်..happy new year 2009 လိုကြယ်ကြယ်..မအော်ရဲသေးပါလား:65::65::65:
2008 တွင်ကောင်းတာများလည်းရှိသလို ဆိုးတာများလည်းရှိခဲ့တာတော့ အမှန်ပါပဲခင်ဗျာ..
၁....မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး ပထမ ၃ ယောက်ဖြစ်လာတယ်.. (လူတော်တွေပေါလာတယ်ပေါ့နော်...:D တော်တာလား လျှော်တာလားတော့သိဘူး ) ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အနော်နဲ့ အမှတ်ပေါင်းက ၆၀ လောက်ကွာတယ် :2:)
၂....ရေကြောင်းuni က မိန်းကလေးတွေစတက်ခွင့်ပြုတယ်
၃....မြန်မာနိုင်ငံမှာ uni တွေတော်တော်များလာပါတယ်
၁....မြန်မာ wiki ဆိုပြီးထွက်လာတယ်.
၂....ပထမဦးဆုံး မြန်မာနိုင်ငံထုတ် PDA ထုတ်လုပ်တော့မယ်တဲ့
၃....Stick တွေရေရေလည်လည် စျေးပေါလာတယ်(4GB မှ ၉၀၀၀ ထဲ)
၆....Wi-Fi access ရနိုင်တဲ့ နေရာတွေ များပြားလာသည်..။
၇....နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပွဲတွေ ခပ်စိပ်စိပ်လေး လုပ်လာကြသည်..။
2008 တွင် ကျွန်တော် အိမ်ပြောင်းလာသည်..။
MCC တွင် IDCS တက်ဖြစ်သည်..။ (အဲဒီမှာ စတွေ့တာပဲဗျာ....:D...)
မည်သည့် uni မှမတက်ပဲ အပြင်မှာပဲ သင်တန်းတွေတက်ဖြစ်သည်..။
အမ်ဇက်တွင် ဟိုနေရာစပ်စပ် ဒီနေရာစပ်စပ် လုပ်နေသည်...။ နောက်လည်း လုပ်ဦးမည်...:D
online security ကိုပိုပြီးသိလာတယ်:)
site တွေ ကို php နဲ့ပိုပြီးရေးဖြစ်လာတယ်
.net ကိုအမြင်ကတ်လာတယ် (လေးလို့)
smoothwall ရဲ့ interface ကို ပြင်ရေးလိုက်တာ ရူးမလိုဖြစ်သွားတယ်:((
အဲဒီမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို linux ကိုတော်တော်သိတယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့အထင်ဟာတော်တော်ဦးကျိုးသွားတယ်:2:
bash&perl scriptings မှာ ပိုပြီးကောင်းလားတယ်:D
အထူးတလည်ကျေးဇူးတင်ရမှာကတော့ gwigwi :d:d:d
အင်း ... ထင်ရတာပဲ. .... ထင်ရတာပဲ ..... ထင်ရတာပဲ ..... ထင်ရတာပဲ ..... ထင်ရတာပဲ .... ထင်ရတာပဲ :d
January သိပ်မထူးခြားသလိုပဲ။ မွေးနေ့ရှိတာကလွဲလို့ပေါ့။
February father နဲ့ဆိုင်သွားလိုက်၊အိမ်မှာအလုပ်လုပ်လိုက်နဲ့ သိပ်မထူးခြားပါဘူး
11လ မှာအေ၀းသင်စာမေးပွဲဖြေတယ်။ ပထမဆုံး ဖြေတဲ့ စာမေးပွဲဆိုတော့ ထင်ပါတယ် ကျမယ်လို့
စိတ်မှမပါတာ (ဒါပေမယ့် ကောင်မလေး နှစ်ယောက် < ယခု miss moe yan အပါအ၀င်> နဲ့တော့ ခင်သွားတယ်)
12လ ကတော့ အပျော်ဆုံးလပဲဂျ။ ဘာလို့ဆိုတော့ father ကြီးက ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ Pentium3ကွန်ပြူတာကို
Core2Quard အပါအ၀င် 13သိန်းကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ ကွန်ပြူတာနဲ့လဲပေးတာ။ MZ မန်ဘာဖြစ်လာတာ။ ကျွန်တော်စိတ်၀င်စားတဲ့ web essential တက်ခွင့် ရတာ အစရှိသည်ဖြင့် ပျော်စရာတွေစုံလင်ခဲ့တာကိုး။
Good Bye 2008 လို့ဆိုနိုင်ပေမယ့် Good Bye 2008's December လို့တော့ မဆိုနိုင်ဘူးဗျ။
မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်တော်ကွန်ပြူတာ၀ယ်တဲ့နေ့က ကျွန်တော့် ကောင်မလေးမွေးနေ့ ဖြစ်နေတာလည်းပါတာပေါ့နော်။